ko htike's prosaic collection: အာဏာရူး သန်းရွှေရဲ့မြေး၊ ဖိုးလပြည့် အသတ်ခံရမလား
မဂ်လသုတ်မှာ လူမိုက်ကို မပေါင်းနဲ့လို့ ဘုရားရှင် ဟောထားပါတယ်။ ပေါင်းလို့ မဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်ခဲ့ရင်
23 May 2009 at 03:35
ဘော်လုံးပွဲအပြီး၊ ည၈နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ၊ စိတ်တိုင်းကျ၊ ကဲနိုင်ဘို့၊ ရုပ်ရှင်၊အဆိုတော်၊ မော်ဒယ်၊ ငယ်ငယ်လေးတွေခေါ်ထားပေး မယ်တဲ့။ ဖိတ်စာထဲမှာ နေရာကိုတော့၊ လျှို့ဝှက်လို့ရေးထားတယ်လေ။
ကျွန်ခံပါရစေဗျာ။ အဒိဌာန်ြပုပါ၏။
Bravo..! An eye for an eye, the essential principle of Hamurabi Code, maybe the most civilized "rule of law" ( justice ) for our country, Burma, where only exists the Jungle Law( the stronger kills the weaker ). Than Shwe killed many of other families' grandsons. So, killing his grandson is justajustice, not an injustice. Let our elder people follow the path of non-violence. Don't blame it because it also needs. But now we younger people necessarily need to think how to kill their whole family. Remember that, in our ancient Burmese history, one can getapolitical power only by killingaking. We should do it because Than Shwe is thinking he isaKing ( of the Chee-brain Kingdom ). My last word is: I'll regard/respect the person who can kill Than Shwe or his family as another Bogyoke Aung San.
( P.S: Forgive me for my stupidness of not knowing Burmese typing presently because I'm justaTaw-thar in computer. )
ခွေးလပြည့်နဲ့ ခွေးမျိုးတွေကို သတ်ဖို့လုပ်နေပြီ ဒီခွေးလေးက အမြီးတနှံ့နှံ့ဆိုတော့ ခြေလှမ်းမှားတာနဲ့ လုပ်ဖြစ်ဖို့ဘဲ စောင့်နေတယ်